लघु कथा : विक्रम सम्वत २१०० सालमा काठमाडौं - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०७:२८ |
मेट्रो रेलबाट भर्खरै म ओर्लें, तीन घण्टामै जुम्लाबाट । काठमाडौं पूरै फेरिएको रहेछ । अण्डर ग्राउण्ड स्टेसनबाट म सिधै फेरि अर्को मेट्रो चढेर लागें साथीको कोठातिर । साथीले पाइपवाला ग्याँसबाट खाजा तयार पारे । खाइवरी एसी रुममा आराम गर्दै मैले सोधेँ, एसी महङ्गो हुदैन विद्यार्थीलाई ? साथीले मन्द मुस्कानका साथ भन्यो, हावाबाट निकालेको बिजुली हो धेरै सस्तो छ । म दङ्ग भएँ । हुन त जुम्ला त्यति अविकसित त थिएन तर यी सबै कुराहरु भर्खर योजनाको चरणमै थिए ।
त्यसपछि हामी धरहरा घुम्न निस्क्यौं । काठमाडौंमा कति धेरै गाडीहरु ? धरहराको पाँचौ तल्लासम्म गाडीहरू खचाखच भरिएका थिए । दशौँ तल्लाबाट काठमाडौं नियालि सकेपछि हामी केबलकारबाट स्वयम्भू हानियौं । केही समयपछि र्याफ्टिङमा रम्दै बाग्मती बन्दरगाहको अवलोकन गर्यांै ।
काठमाडौं साँच्चिकै बिचित्रको थियो । वर्षेनी डिभी भरेर आउँने विदेशी नागरिकहरुका कारण काठमाडौंमा नेपाली र विदेशी बराबरी देखिन्थ्यो । नेपालको डिजेल र पेट्रोल पाइपलाईनबाट संसारभर वितरण हुदोरहेछ,काठमाडौं आएपछि थाहा भयो ।
दिनहुँ सयौँ पानी जहाजका जहाज मालसामानहरु भारत हुँदै विभिन्न मुलुकमा पुग्दोरहेछ । आयात निर्यात गर्ने मेरे साथीको अंकलको कृपाले पानीजहाज चढ्ने हाम्रो निकै पुरानो सपना पनि आज पूरा हुनेवाला थियो ।
Previousनेपालमा मलाई कसैले ‘भाडा माझ्ने’ र ‘ट्वाइलेट सफा’ गर्ने रोजगारी दिनसक्छौ ?
Nextमधेसी मोर्चा उपस्थित नभएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन